युगसम्बाद साप्ताहिक - हामी अहिले पनि मुद्दाकेन्द्रित नभएर व्यक्ति वा पार्टीकेन्द्रित भैरहेका छौं
Tuesday, 04.07.2020, 09:05am (GMT+5.5) Home Contact
हामी अहिले पनि मुद्दाकेन्द्रित नभएर व्यक्ति वा पार्टीकेन्द्रित भैरहेका छौं
Monday, 06.06.2011, 02:49pm (GMT+5.5)
० अहिले दलहरूले पाँच बुँदे सहमतिलाई आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका कारण सहमति अपगालबाट बच्न मात्र गरिएको हो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा पाँच बुँदे सहमतिलाई लिएर जुन ढङ्गले समाजमा नकारात्मक टिप्पणीहरू सुरु हुन थालेका छन्, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पाँच बुँदे सहमति शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पु¥याउने अन्तिम अवसर हो । यसलाई एउटा सकारात्मक दवावको रुपमा हामीले अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरामा नकारात्मकताको मात्र खोजी गर्दा त्यसले समस्या समाधानमा सहयोग गर्दैन ।
दोस्रो कुरा, जुन ढङ्गले कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूबाट टिप्पणीहरू आएको छ यो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । पाँच बुँदे सहमतिका भाषामा कुनै अस्पष्टता या द्वैधअर्थ लाग्ने खालका शब्दहरू राखिएका छैनन् । सहमतिका तीनवटा कुराहरू- तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरू सम्पन्न गर्ने, त्यही अवधिमा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माणका निम्ति प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने विषय चाहिं सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । यसका अतिरिक्त सहमतिमा उल्लेखित सबै विषयहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
० सहमतिका सबै विषय महत्वपूर्ण भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजनामाको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियाका सवालमा पनि माओवादीका नेताहरूले काम हुँदै गर्छ, कुनै तिथिमिति तोकिएको छैन भन्ने गर्नुभएको छ । यसले त दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने नै देखाउँछ नि हैन र ?
सहमतिका बुँदाहरू स्पष्ट नै छन् । तर नेताहरूको मनस्थिति स्पष्ट नभएको हुनसक्छ या त्यसलाई टेकेर आ-आफ्ना अभीष्टहरूलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने अथवा प्राप्त गर्ने मनसाय हुनसक्छ । सहमतिमाथि कुनै अन्योल छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने म आफैं पनि सहमतिको ड्राफ्ट गर्ने काममा संलग्न थिएँ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा छ- अहिले विवादमा पनि यसैलाई पार्न खोजिएको छ । म यसमा के भन्छु भने प्रधानमन्त्री स्वयंले पार्टी अध्यक्षको रुपमा पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने विषय परेको छ । त्यो सहमति यतिबेला संसद्को सम्पत्ति भैसकेको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्नेबारेमा शंका उपशंका उत्पन्न गर्नु चाहिं अर्थपूर्ण छैन । यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि हामीले स्थापना गर्ने भएको राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार हो । यसमा कुनै विवाद गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई अगाडि ल्याएर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यलाई अन्तै मोड्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको एउटा खाका आइसकेपछि राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन्छ र संयुक्त सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ ।
० हैन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा तत्काल राजीनामा नदिने भन्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दुईटा कुरा भन्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । पहिलो कुरा, आफू जतिदिन रहन्छु सरकार परिवर्तनको हल्लाले दैनिक प्रशासनमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरलाई अगाडि आउन नदिने हुनसक्छ । अर्को राजीनामा गरिसकेपछि विगतमा जस्तै लामो समयसम्म सरकार गठन हुन सकेन भने त्यो घोर अनर्थ हुन जान्छ । त्यसकारण म राजीनामा गर्न तत्पर छु तर सहमतिका आधारहरू खोजौं भन्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ । यो कुरालाई नकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दिन । कुरा कहाँनेर अड्किन्छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंले वा उहाँका सल्लाहकारहरूले वैकल्पिक उम्मेदवार खडा नभएसम्म प्रधानमन्त्री कायम रहने हो भन्ने बुझ्छ वा व्याख्या गर्छ भने त्यो गलत कुरा हो । अन्यथा शान्ति र संविधानको विषयमा सहमति जुटाउने जग नै राष्ट्रिय सहमतिको जग हो । अहिले नाममा सहमति खोज्न थाल्नुभयो भने कसैको नाममा पनि सहमति हुने अवस्था म देख्दिन । तर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विवादित विषयहरू टुंग्याइयो भने भोलि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुने जग त्यही हुनेछ । अहिले नै सरकारको जग खडा गर्ने कुरा अनुचित हो ।
० तैपनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा दिएपछि निकास आउँछ भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् नि ?
विकल्प छैन भन्ने कुरा हैन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि तपाईंले मुद्दालाई बिर्सेर व्यक्तिमा समाधान खोज्नुभयो भने त्यो विकल्प होला । तर भोलि संयुक्त सरकार बन्ने इच्छा र आधारहरू के के हुन् भन्ने प्रमुख विषय हो । शान्ति प्रक्रियालाई हामी यसरी टुंग्याउँछौं, संविधान यसरी लेख्छौं भन्नेमा सहमति हुनेवित्तिकै निकासको बाटो त खुलिहाल्छ नि । यसपटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रातभरिको छलफलमा आफूले शान्ति र संविधानको पक्षमा केन्द्रीय कमिटीबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्छु, शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा नेपाली सेनाको मातहतमा रहने गरी सेना समायोजन गरी विशेष निर्देशनालय रहने खालका कुराहरूलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं र लेखेरभन्दा गरेर देखाउने कुरा मुख्य हो भन्नुभएको छ । उहाँले हामी सबै परीक्षामा रहेको र सबैभन्दा बढी परीक्षामा माओवादी रहेको हुँदा हामीलाई अवसर दिनुहोस् भन्नुभएको थियो ।
मैले यो कुरा किन उठाएको भने यदि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सवालमा माओवादी पार्टी तत्पर भएर अगाडि आउने हो भने माओवादीलाई त्यो अवसर दिने कुरामा सबै दलहरूको सहमति छ । नेपाली कांग्रेस पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने ग्यारेन्टी गरी सेनाबाट माओवादीको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भने सरकारको नेतृत्वका बारेमा हामी खुला छौं भनिरहेको छ र एमालेले पनि त्यही कुरा भनिरहेको छ । त्यसकारण माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरौं भन्ने हो भने उसले ती न्यूनतम कामहरू त पूरा गर्नुपर्ने होला नि । भोलि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भने पनि शान्ति प्रक्रिया यसरी अगाडि बढ्छ भनेर माओवादीलाई आश्वस्त तुल्याउने कुराहरू होलान् । त्यसकारण अहिले चलिरहेको विवादको सबभन्दा रद्दी पक्ष भनेको मुद्दामा नगएर व्यक्ति वा पार्टीमै केन्द्रित हुनु हो । हामी कहिल्यै पनि मुद्दामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सकेनौं । संचार माध्यमहरूले पनि मुद्दालाईभन्दा व्यक्ति वा पार्टीलाई नै केन्द्रित गरेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य यो तीन महिनामा कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने विषयमा एउटा कार्यतालिका बनाएर ती विवादहरू जति छिटो सल्टाउन सकियो त्यति छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ ।
० त्यसो हो भने जुन दिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँछ त्यतिबेला पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन भयो भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले ‘मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु’ भनिसकेपछि वस्तुतः प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसक्यो । यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि केही व्यावहारिक कामहरू बाँकी छन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार बन्ने हो भनेदेखि आजैदेखि त्यसका आधारहरू पहिल्याउनतिर लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको राजनामा कुनै वाधा पनि होइन र मुद्दा पनि होइन । त्यसकारण बहसलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा केन्द्रित गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।
० तपाईको कुरा सुन्दा पनि आशावादी हुनसकिने बलियो आधार देखिंदैन । पाँच बुँदे सहमतिबाट मुलुकले निकास पाउँछ भनेर आम नागरिक आश्वस्त हुने अवस्था त देखिएन नि हैन ?
जनतामा शंकाका आधारहरू छन्, म त्यसलाई अस्वीकार गर्दिन । हामीले पाँच बुँदे सहमति ग¥यौं र मुस्काउँदै बाहिर निस्कियौं, टेलिभिजनका पर्दामा हाम्रा अनुहार हसिला थिएँ त्यसकारण अब कार्यान्वयन भैहाल्छ भनेर आधार तयार भएको छैन । विगतका व्यवहारले शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छाडेको छ ।
म यहाँ के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने इतिहासले हामीलाई उपलब्ध गराएको सम्भवतः यो अन्तिम अवसर हो । यो कुरा मैले माथि नै भनिसके । तपाई आगामी भदौ १४ गते रातिको कल्पना गर्नुहोस् । भदौ १४ सम्म तोकिएका कामहरू गर्न सकियो भने बाँकी कामका लागि अरु समय थप्छौं भनेका छौं । किनभने त्यतिबेलासम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा मात्र तयार हुन्छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिन जनताको बीचमा जाने र अरु प्रक्रियागत कामहरू गरेर टुंग्याउन न्यूनतम अर्को तीन महिना त लाग्छ नै । अहिले जनताको असन्तुष्टि पनि समय थपियो भन्नेमा नभएर थपिएको समयको सदुपयोग भएन भन्नेमा हो । त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आगामी भदौ १४ गते रातिसम्म हामीले शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पु¥याएर त्यसका मूलभूत काम सम्पन्न गर्न सकेनौं भने त्यसपछि अवसर कहीं कतै पनि बाँकी रहने छैन । यो अन्तिम अवसर भएकोले सबै दलहरूले यो सच्चाइलाई बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।